RW Rooble oo soo saaray amarro la xariira doorashada berri | KEYDMEDIA ENGLISH
RW Rooble oo soo saaray amarro la xariira doorashada berri
Warkan ayaa ku soo aadaya xilli saacadihii la soo dhaafay ay fowdo amni wadeen saraakiil ciidan oo uu ugu horreeyo Taliyaha Booliska Cabdi Xasan Xijaar, kaas oo qeyb ka ahaa, Guddiga amniga doorashada dadban, hayeeshee, hadda dhinac la saftay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ciidanka nabad ilaalinta ATMIS, ku amray in ay si degdeg ah ula wareegaan amniga, Xarunta Ciidanka Cirka, [Afisyooni], halkaas oo hangar ku yaalla ay berri ka dhacayso doorashada Guddoonka Golaha Shacabka.
Wuxuu sheegay in ciidanka nabad ilaalinta ATMIS, ay la shaqayn doonaan Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Wasaaradaha Amniga iyo Gaashaandhigga iyo waliba Guddoonka ku meel gaarka ah ee Aqalka hoose, kaasoo berri shaqadiisu ku egtahay.
Ra’iisul Wasaare, Rooble, ayaa sidoo kale, sheegay, in liiska xildhibaannada galaya teendhada Afisiyooni, uu soo gudbin doono, Guddoomiyaha KMG ah, kaddibna waxaa hubinaya oo ATMIS u gudbinaya xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaariinta, Maxamed Xuseen Rooble, oo safar shaqo ugu maqan dalka Switzerland, ayaa la filayay inuu maanta dib ugu soo laabto waddanka, hayeeshee, ma uusan imaan, waxaana la filaya inuu berri ka soo dego Aadan Cadde.